China ukukhuthaza ukomelela & lokuphola mveliso - China Tianjin Shengxin Sports Iimpahla
China ukukhuthaza ukomelela & lokuphola kushishino
IBhunga State ukhuphe isicwangciso ukuze kuphuhle ukomelela kunye noshishino nexesha lokuphola, ukusekwa kwegqiza usukelo ukwandisa imveliso kwecandelo ngaphezulu kwe-3 ezigidi yuan ($ 442.5 yezigidi) ngo-2025.
Ngelo xesha, a ecosystem enempilo abaza kudalwa, kunye nesakhiwo esifanelekileyo kushishino, ubonelelo etyebile zemveliso qete kunye namaziko, imfuno ephezulu ngesifo kunye nenkonzo ephezulu abafanelekayo, ngokutsho uxwebhu lwaseburhulumenteni akhutshwe Okt 28.
Oku kubizwa ukuphucula inkqubo inkonzo ukuqina lokuphola kweli lizwe ngokuphuhlisa imisebenzi yemihla ngemihla abanxibe impahla, ezemidlalo ngaphandle, kunye nezemidlalo kunye neempawu yenkcubeko, zokukhuthaza ukhenketho kwezemidlalo, kwaye luhlanganisa Internet Plus kunye nophuhliso zolu shishino.
ezemidlalo imfanelo Daily, ezifana ekhatywayo, ibhola yomnyazi, ibhola yevoli, ping-pong, intenetya kunye nokubaleka, kufuneka kukhuthazwe phambili yathandwa, wathi uxwebhu. Ezinye enye uphuhliso yangaphandle nefashoni zemidlalo kufuneka kwakhona ikhawuleziswe, kubandakanywa ebusika, iintaba, ezemidlalo yamanzi, imidlalo iimoto, samahashe kunye yegalufa. Le midlalo ezineempawu yenkcubeko, ezifana kung fu, isikhephe inamba kunye nengonyama ukudanisa, nazo zibandakanyiwe kwisicwangciso.
Esi sicwangciso kwakhona babongozwa ukuba ukuphuhlisa lokhenketho emidlalo kunye nokuxhasa uphuhliso loshishino kunye technologies, njenge-intanethi, Big Data kunye intanethi.
Njengokuba kude njengoko hlakulela abadlali kwimarike kushishino likhathazekile, isicwangciso wathi ukuqina lokuphola yezorhwebo kunye nemibutho yoluntu kufuneka bakhuthazwe ukuba ukwandisa amashishini, yaye ziyakhuthazwa ezinye iibrand Chinese ezisemgangathweni kufuna inkxaso ngakumbi kwimarike ezinkulu - ezifana ekwenzeni Ipo nokukhupha iintambo - ukwenzela ukuphucula ukhuphiswano lwabo ngamazwe kunye neenkampani-class ezweni ziya.
Limema abasemagunyeni bathi- wamisa amaqonga incubator ukuxhasa zokuqala swi qete nokuba nexesha lokuphola, ingakumbi ezo yamiselwa iimbaleki umhlala. Ukongeza, imibutho emidlalo engekho ziyakhuthazwa ukuba zandise iinkonzo zazo kwaye endaweni, ukusa kumkhamo othile, iinkonzo zemidlalo zikarhulumente ezibonelelwa ngurhulumente.
Ngaphandle ekuxhaseni ezemidlalo abangatshatanga kunye nenkampani, uxwebhu likwafuna isakhiwo kushishino olenzelwe. Umlinganiselo necandelo lwenkonzo kushishino ukhuthazwa ukuba avuswe. Ukukhokela iiklabhu ukufaneleka, imisebenzi, iziseko mveliso kunye neeprojekthi yakhiwe ukubeka imizekelo kuphuhliso loshishino.
Imimandla izixhobo ezikhethekileyo zendalo, kuquka ihlathi, amanzi, omanzi, iintaba iintlango, ziyakhuthazwa ukuba ukuphuhlisa imidlalo ezithile ezilungelene nemeko yendawo, ukwenzela ukudala uphawu yabo.
Uxwebhu ebizwa yolwakhiwo qete kwaye lokuphola izibonelelo ngokwenza ngokusebenzisa ezidolophini kuquka neParklands, izithuba ezingenabantu, uphahla isakhiwo kunye angaphantsi - ekudaleni izithuba fitness phakathi komgama imizuzu eli-15.
Ngaphezu koko, wabongoza kusetyenziswa imithombo kwenkundla, ukhawulezisa amashishini kunye namaziko ukuba avule amaziko ezemidlalo zazo kuluntu, nokukhuthaza izibonelelo izikolo 'ukuba aphengela emva yeklasi kwiiholide.
A Inani lamaziko qete kwaye zolonwabo ezizodwa ezifana entabeni nangaphandle iinkampu, iinkampu isithuthi zolonwabo, kunye nokunyuka kunye nezikhululo inkonzo ikhwele kufuneka zakhiwe, olu xwebhu wathi.
Kukwandisa uphando, uphuhliso kunye nesikhundla lwemveliso qethe kunye nezixhobo zokuzonwabisa, urhulumente yakhuthaza amashishini, amaziko ophando lwezenzululwazi, kunye nemibutho yasekuhlaleni ukwenza eendibano cross-mveliso, kunye nokuxhasa amashishini izixhobo qethe lemveliso ukwandisa ishishini labo kumacandelo inkonzo, aqhube phesheya yokudityaniswa kwakunye ekuthengeni ezi ncwadi, kudityaniswe amashishini, kunye nophuhliso ngokudibeneyo.
Uxwebhu izicwangciso ukuxhasa amashishini asakhasayo izixhobo ezaziqingqelwe iimfuno ezahlukeneyo kumaqela yobudala ahlukeneyo, kwakunye nezixhobo zophando kunye nobugcisa Kumda ezifana nezixhobo zemidlalo wearable kunye nezixhobo ngokwenene zemidlalo yenyani.
Kwangaxeshanye, imigaqo-nkqubo enxulumene kufuneka ziphuculwe ukunika lula ngakumbi ukhuseleko amaqela fitness ezahlukeneyo, ithandwe ulwazi lwenzululwazi qete, nomtsalane mali zentlalo ukutyala imali kwishishini yezemidlalo, ukomeleza italente ulawulo ukufaneleka, kunye nokuseka imigaqo inkonzo kunye nomgangatho umgangatho ukomelela kunye zolonwabo icandelo ngokubhekiselele inkonzo, uqeqesho lwezakhono, ulawulo lomsebenzi, ukwakha iziseko, kunye nezixhobo iimveliso.